ललितपुर कांग्रेसमा जिल्ला सभापति अमात्यका सबै उम्मेदवार पराजित – Apan Dainik
ललितपुर कांग्रेसमा जिल्ला सभापति अमात्यका सबै उम्मेदवार पराजित
अपन दैनिक न्युज डेस्क Follow on Twitter २०७८ मंसिर ४ गते शनिबार १३:२४
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ललितपुरको प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा जिल्ला सभापति मदन अमात्यको टीम नै पराजित भएको छ ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबारदेखि प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु भएको हो । ललितपुरका ६ वटा प्रदेश कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा जिल्ला सभापति अमात्य निकट उम्मेदवार पराजित भएका हुन् ।
शुक्रबार राति सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. – १ को प्रदेश सभा (१) को सभापतिमा मिलन सिलवाल विजयी भएका छन् । उनले तीर्थ घलानलाई पराजित गरेका हुन् ।
सिलवालले दुई ससय मत प्राप्त गरे भने घलानले ८३ मत पाएको जिल्ला निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा (२) मा ज्ञानबहादुर लो प्रदेश सभा सभापतिमा विजयी भएका छन् । उनले २०१ मत ल्याएर विजयी भए भने उनका प्रतिस्पर्धी कृष्ण चन्द्र महर्जनले ११० मत प्राप्त गरे ।
दुवै प्रदेशसभाका विजयी सभापतिलाई कांग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थराज्यमन्त्री उदयशम्शेर राणाको समर्थन थियो भने घलान र महर्जन जिल्ला सभापति अमात्यका उम्मेदवार हुन् । संथापन समूहमै रहेका राणा र अमात्यका जिल्लामा आआफ्नै गुट छन् । ललितपुर क्षेत्र-१ कांग्रेस नेता राणाको निर्वाचन क्षेत्र हो ।
ललितपुर क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा (१) को प्रदेश कार्यसमिति सभापतिमा दिवाकर नेपाल निर्वाचित भएका छन् । सभापतिका लागि तीन जना उम्मेदवार रहेकोमा नेपालले ८५ पाए भने उनका प्रतिद्वन्दी सञ्जय अर्यालले ६३ र जयकिशन बोगटीले २८ मत प्राप्त गरे । प्रदेश सभा (२) को सभापतिमा चन्द्रमान बज्राचार्य सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । नेपाल र बज्राचार्यलाई पूर्वसांसदद्वय रामकृष्ण चित्रकार र चन्द्र महर्जनको समर्थन थियो ।
जिल्ला सभापति अमात्यको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा पनि उनका दुवै उम्मेदवार पराजित भएका छन् । प्रदेशसभा क्षेत्र (१) मा वीरेन्द्र महर्जन विजयी भए । उनले ११५ मत पाए भने प्रतिस्पर्धी गोविन्द घिमिरेले १०७ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (२) मा सुरेन्द्र डंगोल विजयी भए । उनले १०२ मत पाए भने प्रत्यासी निरन खड्काले ७० मत पाए । सभापतिमा विजयी महर्जन र डंगोललाई महासमिति सदस्य जितेन्द्र कुमार श्रेष्ठको समर्थन थियो भने पराजित दुवै उम्मेदवार जिल्ला सभापति अमात्य निकट हुन् ।
गुल्मीमा चट्याङ लागेर घाइते भएका बालकको मृत्यु
२०७८ श्रावण २८ गते बिहीबार ०६:४७
मिर्चैया नगरपालिकाको करार सेवा लिने सम्वन्धि सूचना
२०७८ भाद्र २८ गते सोमबार १७:०७
असारे विकासको फण्डा (सम्पादकीय)
२०७७ बैशाख १८ गते बिहीबार ०४:४२
कोरोनाको तेस्रो लहर र हाम्रो तयारी (सम्पादकीय)
२०७८ श्रावण २२ गते शुक्रबार ०६:३२